Rivo-pikomiana Iray Mitsoka An’i Madagasikara Volana Vitsivitsy Mialoha Ireo Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2018 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, عربي, Français
Ireo solombavambahoaka mpanohitra miarahaba ireo mpanao fihetsiketsehana eo amin'ny Kianjan'ny 13 Mai ao Antananarivo, Madagasikara, avy amin'i Jago Kosolosky
[Naverina navoaka indray ity lahatsoratra ity rehefa nahazoana alàlana tamin'i Jago Kosolosky, tonian-dahatsoratra / mpanoratra ny lahatsoratra ho an'ny tranonkalam-baovao Le VIF.]
Ao Madagasikara, ny 80% n'ny mponina dia miaina ao anaty fahantrana amina 1,25 dolara isanandro. Eo ambony kelin'ny 65 taona ny fahelàna velona ho an'ireo mponina miisa 25 tapitrisa. Mba ho fampitahàna, ao Belzika, ny salan-taona dia 81 taona. Sahala amin'ireo firenena afrikana marobe hafa rehetra, miaina anaty fipoahan'ny isan'ny mponina mifamatotra amin'ny fandosirana avy any ambanivohitra i Madagasikara, izay miteraka tsindry ara-toekarena.
Na dia voarara ofisialy aza ny fihetsiketsehana ny andron'ny sabotsy 21 Aprily, an'arivony maro ireo mpanao fihetsiketsehana no tonga nanoloana ny lapan'ny tanàna tao andrenivohitra. Mpitandro ny filaminana sy miaramila miaraka amina pick-up ary moto no niandry azy ireo tamin'izany. Ora vitsivitsy taorian'izay, rehefa nitifitra an'ireo mpanao fihetsiketsehana tamina entona mandatsa-dranomaso ny miaramila iray nifoka sigara, ny sary miverina tamiko mikasika ireo tafika ireo dia mifanaraka amin'izay heveriko momba ny andian-tafika mpikarama anady.
Ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana mifanatrika eo amin'ny kianjan'ny Fahaleovantena ao Antananarivo, avy amin'i Jago Kosolosky.
Ireo solombavam-bahoakan'ny antoko mpanohitra, izay manohitra an'ireo lalàm-pifidianana telo nankatoavin'ny parlemantera roa, tamin'ny voalohan'ny volana Aprily, no niantso ireo mpanao fihetsiketsehana. Ampangain'ny avy amin'ny fanoherana ny filoha Hery Rajaonarimampianina ho mikasa ny hampangina ireo lalàm-pifidianana izay ho filoham-pirenena sy parlemantera hatao amin'ity taona ity. Tsy mbola misy aloha hatreto ny datin'andro raikitra, ary na ny hanaovana ireo fifidianana aza dia tena mbola tsy azo antoka.
Hatramin'ny 2014, Rajaonarimampianina no filoham-pirenena ao Madagasikara ary hatreto izy dia mbola tsy nilaza na hiverina hilatsaka ho fidiana na tsia, nefa izay no andrasana. Tokony hifanatrika amin'ireo filoham-pirenena roa teo aloha izy noho izany: Marc Ravalomanana izay filoham-pirenena tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 2009, ary i Andry Rajoelina izay nanongana an'i Ravalomanana taminà fanonganam-Panjakana ary nitondra ny firenena hatramin'ny fahatongavan'ny filoha ankehitriny.
Tsy mamim-bahoaka velively ny filoham-pirenena ankehitriny, eny fa na tany am-boalohany aza, nitondra fitoniana ny fidirany teo amin'ireo andraikitra nosahaniny io taorian'ny vanim-potoana politika tena nahamay. Ratsy ny fanombohana fa vao nandritra ny fanokanana azy fotsiny, nàka tàhaka ny kabarin'ny filoham-pirenena frantsay taloha Nicolas Sarkozy i Rajaonarimampianina, nanamafy ny sary maha-filoha saribakolin'ny governemanta frantsay azy.
Ny omalin'ny fihetsiketsehana, voalaza fa nandositra ny tanàna ny filoha. “Saingy tany amin'ny onjampeon'ny mpanohitra no naharenesana izany”, hoy Joelina Rasolofo nihomehy. Mpanao gazety tao amin'ny Radio Don Bosco izy nandritra ny dimy ambiny folo taona ary izy no nitondra ahy teny amin'ny fihetsiketsehana. Iray amin'ireo onjampeo goavana an'ny firenena izy io ary onjampeo tokana, izay nandritra ny krizy ara-politika tamin'ny 2009 (izay namoizana ain'olona 135), izy no nitohy nandrakotra vaovao tamin'izay zavatra nitranga rehetra tao amin'ny firenena. Grenady mandatsa-dranomaso vitsivitsy taty aoriana, nitantara tamiko izy “fa androany, tena mitovy tanteraka tamin'izay niantombohan'ny 2009 ny zava-mitranga”.
Toy ny mahazatra, ny Araben'ny fahaleovantena dia arabe be mpivezivezy, saingy ankehitriny mikatona avokoa ireo mpivarotra ary voabada daholo ireo varavarana. Henjana ny toe-draharaha. Natosiky ny kiry, ireo mpanao gazety, saika avy ao an-toerana avokoa, no mitety ireo toerana. Sahala amin'ireo vondrona kely an'ireo mpanao fihetsiketsehana, miomana amin'ny ady ho an'ny lapan'ny tanàna ireo polisy sy miaramila.
Ireo tafika tao analakely, avy amin'i Jago Kosolosky.
24 taona i Alain Patrick ary mianatra amin'ny Anjerimanontolon'Antananarivo. Milaza izy fa tsy mpikambana amina antoko politika, saingy te-hanao fihetsiketsehana fotsiny: “Tia tanindrazana aho, ary tiako ny fireneko, saingy be loatra ny kolikoly eto aminay. Maniry ny hijanona eo amin'ny fitondrana io filoha io saingy tsy azonay leferina izany.” Matahotra ve izy? “Tsia, tsy izahay no ratsy.”
Manako ny fipoahana. Sady mirodorodo ny andian'olona iray goavana no mihira mankany amin'ireo mpitandro ny filaminana ary mandeha mankany amin'ny kianja. Mifandona amin'ireo entona mandatsa-dranomaso ireo sainam-pirenena malagasy. Lasa rahona teo amin'ny arabe ny entona, miditra amin'ny fitorahana vato ireo mpanao fihetsiketsehana, ary vehivavy mpanao gazety iray avy ao an-toerana no torana. Taty aoriana kely, tafahaona taminy aho. 24 i Manoa Raoelii, ary miasa ao amin'ny Free FM. Ny entona mandatsa-dranomaso no nanempotra azy, saingy nahatsiaro tena izy: “Tsy haiko na ho ratsy toy ny tamin'ny 2009 izao, mbola tanora aho tamin'izay. Fa mbola tsy nahita ohatr'izao.”
Mankafy ny tavoahangin-dranoko lehibe ireo mpanao gazety sy ireo mpanao fihetsiketsehana miaraka amin'ireo maso sy tenda main'ny entona mandatsa-dranomaso. Nahantoko teo amin'ireo solomasoko ny mosoara nomandoana mba hiarovako ny tava ary hitako fa ny vinaingitra no manafaka ireo fahamaizana.
Ao anatin'ireo finiavana ny hisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana, tsy nijanona ela teo amin'ireo mpanao gazety ireo polisy ary tsy mifampiresaka mihitsy. Niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka mpanohitra miedinedina mitondra salotra ny sasantsasany tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Niresaka tamin'ny iray tamin'izy ireo aho no, tampoka teo, norarafan'ny polisy entona mandatsa-dranomaso izahay, latsaka teny amin'ny tany ny dictaphone an'ny namana iray ary nandositra ny rehetra.
Rossy, na Paul Bert Rahasimanana, dia solombavam-bahoaka voafidy ary mpanakanto malagasy malaza indrindra hatramin'ny taona sivifolo. Nisy fotoana, nisafidy ny hanao sesitany ny tenany tany Frantsa izy. Taloha kelin'ny nandrarafana entona anay, lehilahy iray manana herimpanahy mahaliana no ninaonaona teo an-tsofiko: “Takiako hiala rahampitso ny filoha .”
Fotoana fohy taty aoriana, niditra tao amina toeram-pisotroana kafe iray aho niaraka tamina lehilahy iray nanambara ny tenany ho kandidà ho filoham-panjakana, Alain Andriamiseza, avy amin'ny MCDM, ilay antoko bitika indrindra ao amin'ny fanoherana. Nanafatra ‘expressos’ roa izy ary nanomboka ny lahateniny: “Eto, tsy misy fampahalalam-baovao malalaka. Hitanareo ny fomba fitondrana ireo mpanao gazety.” Nalàko ny mosoara teo amin'ny solomasoko, ary nahetsiketsiko ny loha.
“Misy andininy miendrika jadona ao anatin'ireo lalàm-pifidianana izay tsy maintsy hilazàn'ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana ny heviny. Fomba iray hanilihana ireo kandidà amin'ireo fifidianana ho avy izy ireo. Na inona na inona ny ho fanapahankevitry ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana, na mifanaraka amin'ny lalàm-panorenantsika ny lalàna na tsia. Lalàm-panorenana vaovao no ilaintsika maika, lalàm-panorenana iray mendrika an'io anarana io.”
Iray tamin'ireo olona mpanao politika niantso ireo vahoaka ho tonga maro i Andriamiseza. Mahita antony sahaza tsara izy hikarakarana fihetsiketsehana : “Fefiky ny kolikoly sy ny fanaovana kitranoantrano ny firenenay. Amidin'ny filohanay amin'ny Shinoa i Madagasikara mba hananany harena. Ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany no manimba ny firenenay, ary miha-mahantra hatrany hatrany ny vahoaka eto an-toerana. “Mieritreritra an'ireo soratra shinoa eny amin'ny fitaovan'ireo polisy sasantsasany aho ary takatro ny hasosorany fanampin'izay, ifampizaràn'ny ankabeazan'ny mponina eo an-toerana.
Ireo miaramila sy ny entona mandatsa-dranomaso tao Antananarivo, avy amin'i Jago Kosolosky.
Maminavina ny fianjeran'ny governemanta izy. “Andraso, ny 13 may”. Daty manamarika izany. Ny 13 may 1972, an'arivony ireo mpanao fihetsiketsehana no namonjy io toerana ao an-drenivohitra io mba hitaky ny famoahana an'ireo mpianatra nogadraina nandritra ny fikasan'izy ireo hanapariaka ny fanabeazana, ary nitolona nanohitra ny fampanjakazakana ny fiteny frantsay.
Manodidina ny efapolo ireo maty ary maty niaraka tamin'izy ireo ny Repoblika voalohany tao Madagasikara. “Mifanohitra amin'ny an'ireo vahoaka afrikana, tsy afaka mandositra izahay. Mihitsoka eto Madagasikara izahay ka noho izany tsy maintsy manongotra hoavy hafa ho an'ny firenenay.” Mandao azy aho ary miverina eny an-kianja.
Raha toa fotoana kely taorian'izay, nandrakotra be ahy loatra ny entona mandatsa-dranomaso, afaka naka aina tao amin'ireo relijiozin'i Don Bosco izay teo amin'ny Avenue de l'Indépendance aho. Nomena voasary laoranjy mavomavo vitsivitsy vokatra avy ao amin'ny firenena aho, ary miverina mahazo hery. Avy ao an-davarangana, hitako ireo mpanao fihetsiketsehana manandrana mihazo ny kianja ary mampiasa ny hamaroan'isan-dry zareo. Ireo hiakiaka sy ireo hira no manambara hoe avy aiza indray ny fanafihana manaraka. Maharitra ora vitsivitsy ny kilalao saka sy totozy, saingy manatona ny kianja ireo mpanao fihetsiketsehana ary mahavita mihitsy mametraka sakana tsy hahafahan'ireo pickups feno entona mandatsa-dranomaso tsy handeha.
Nony farany, azon'izy ireo ny lapan'ny tanàna ary nivadika ho tsimoka fanonganam-panjakana ilay fihetsiketsehana, rehefa niala niaraka tamin'ireo hehy sy esoeson'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo polisy sy ireo miaramila. Nambara avy teo an-davarangan'ny lapan'ny tanàna ny fandresena ary hipoka olona an'arivorivony ny kianja, izay nihira sy nandihy. Mipoitra tampoka ireo mpivarotra gilasy, manatona ireo fitaovana vita amin'ny taratasy natao hiarovana amin'ny entona mandatsa-dranomaso mandritra ny fihetsiketsehana. Nampiasain'ireo mpanao fihetsiketsehana ny rano fantsitsitra manoloana ny lapan'ny tanàna ankehitriny mba hampangatsiatsiaka, nesorina ireo naratra, ary vaky ny tena fetim-bahoaka.
Manjohy ireo olona marobe manoloana ny lapan'ny tanàna aho. Indimy no tsapako fa nisy nikaroka ny paosim-patalohako, izay mosoara mando fotsiny fiarovako ny entona mandatsa-dranomaso no tao. Vazaha tokana, izaho no haza idealy ho an'ireo mpangarom-paosy. Noraisiko tamin'ny vozon'akanjony ny iray: “Inona no tadiavinao ry namako?” Mitsiky aho, dia lasa izy mandositra.
Miakatra ny lavarangan'ny lapan'ny tanàna ireo solombavambahoaka ary miresaka amin'ireo vahoaka, alohan'ny hampanakoakoana ireo hira fitolomana malagasy manohitra ny fanjanahana avy alalan'ireo fanamafisam-peo. Mihira miaraka amin'izy ireo avokoa ny rehetra.
Efatra no maty, ka ny roa ankizy jenjin'ny entona mandatsa-dranomaso, ary enina ambinifolo no naratra. Manambara dingana vaovao ny mpanohitra ary tamin'ny alalan'ny hafatra tamin'ny fahitalavitra ny filoha no nihetsika: “Miantso ireo olona rehetra eto Madagasikara aho mba ho tony, ary hanaja ny demokrasia. Izay nitranga, dia tsy inona fa fanonganam-panjakana.” Milaza koa izy fa hampiasa hery ireo tomponandraikitra amin'ny hoavy. Manameloka ireo herisetra ny Fiombonambe Eoropeana ary miantso ireo mpitondra fanjakana mba hampihatra ny fandeferana, ary manohana ny hisian”ireo fifidianana filoham-pirenena azo hitokisana, mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara amin'ny taona 2018.”
Raha ery ambony lavarangana ireo solombavambahoaka manameloka ny kolikoly, miakatra anaty fiarakaretsaka aho ary mandao ilay fetim-bahoaka. Fotoana fohy taorian'izay, polisy roa no nanakana ny fiarakaretsaka nandehanako, Citroën 2 CV efa tranainy. “Tsy any aminao ve ny pasipaoronao?” Te-handresy lahatra ahy ireo polisy roa lahy hoe manana olana aho. Mivoaka ny fiarakaretsaka aho ary manontany azy ireo: “Dia ahoana, ohatrinona?” Nitsiky izy ireo, ary namihina ny tànako. Nandoa 10.000 ariary tsirairay tamin'izy ireo aho (eo ho eo amin'ny €2,5 eo) dia miverina miakatra ao anaty fiara.
Naverina navoaka indray ity lahatsoratra ity rehefa nahazoana alàlana tamin'i Jago Kosolosky, tonian-dahatsoratra / mpanoratra ny lahatsoratra ho an'ny tranonkalam-baovao Le VIF.]